Dib u Milicso Mustaqbalka Villa Somalia - iftineducation.com
iftineducation.com – Laga soo billaabo Madaxweyne Cabdullaahi Yusuf Axmed, Guddoomiye Shariif Xasan iyo Ra’iisal Wasaare Cali Maxamed Geeddi, ku xiji Nuur-Cadde, Shiikh Shariif, Xasan Shiikh, Saacid Shirdoon, Cabdiweli Shiikh, Cumar Cabdirashiid iyo qaar kale oo Wasiirro u badan Madaxda Sare ee dalka soo martay intooda badan inta aanay xilka qaban waxay ahaayeen rag aan macriifo wanaagsan leennahay. Qaar aan sheeko wadaag nahay. Kuwo aan arday wada ahayn iyo qaar aan awal ku tilmaami jiray saaxiibbo dhow oo aan guryaha iyo Hoteellada isku booqan jirnay inkasta oo markii dambe aan u beddelay in ay yihiin rag aan is naqaan.
Sidaas ay tahay, weligeey iskumaan deyin mas’uul la doortay sida Madaxweyne iyo Guddoomiye Baarlamaan ama mid la magacaabay sida Ra’iisal Wasaare iyo Wasiir in aan madaxa ka qabsado. In aan dad kale oo aan iyagu ogeyn uga been sheego. Ama in aan isaga u caga jugleeyo si aan uga dhaliyo go’aan aan madaxiisa ka soo go’in.
Aan dib u milicsanno waxa aan soo marnay si aan hore ugu soconno.
Dhacdo Layaab Leh Oo Ka Dhacday Magaaladda Cadaado